P2 Obere Pixel Pitch Indoor LED Na-egosiputa Maka Mgbakọ
Ime ụlọ, ụlọ ihe nkiri TV, egwu egwu, ogige ntụrụndụ, Ọrụ nke Stage, Ihe omume Live, ụlọ ndozi Dj maka ụlọ ịgba egwu abalị, egwu egwu, ememme, ihe omume comany, windo ụlọ ahịa ma ọ bụ ihe ngosi, ọgbakọ, ebe a na-eme egwuregwu na ebe ndị ọzọ maka mgbasa ozi na ebumnuche ntụrụndụ.
1. Enwere ike iru ume ọhụrụ dị elu 3840HZ. Site na mma kacha mma IC, ọ nwere ike igosi gị mmetụta ọhụụ zuru oke.
2. Ọ dịghị mkpa iwepu azụ n'akụkụ nke panel dochie ada modul.
3. The Die casting aluminum cabinet na-eme ka otu kabinet dị ka ìhè dị ka 8KG.
4. Ihe nkpuchi a haziri nke ọma nwere ike ime ka elele ihu ya ruo ogo 140.
5. 500mmx500mm na 500mmx500x1000mm nwere ike ịgwakọta ojiji, dị mfe maka gị iji ya na ihe omume dị iche iche.
6. Ejikọtara ya na nchapụta na-agbanwe agbanwe teknụzụ na ike PFC, obere ugbu a nwere ike ịchekwa ike karịrị 35%, ọ pụtara ịchekwa ego 35%.
Site na teknụzụ ngosi LED na ahịa ahịa ngosi na-eto eto mgbe niile, obere pikselụ P2mm ime ụlọ ngosi a na-ewu ewu ugbu a. Ugbu a Indoor ofu P2 Ikanam ngosi bụ nke kacha nta pixel pitch Ikanam ngosi na ime ụlọ ofu ngosi ahịa. Emepụtara ngosipụta P2mm nke ime ụlọ SMD LED gosipụtara maka nkọwapụta dị elu na oke-iche nke ihuenyo kwesịrị igosipụta foto na vidiyo doro anya karị maka ndị na-ege ntị, yana atụmatụ nke njupụta dị elu kwa mita mita na akara 2.0mm na kọlụm oghere, P2 ofu Ikanam ngosi bụ nke mbụ na-ahọrọ ma ọ bụrụ na HD video ọkọlọtọ a chọrọ na ime ụlọ ngwa. a na-ejikwa ya nke ọma na ụlọ nzukọ, ime ụlọ nyocha, ime ụlọ nchịkwa, ma ọ bụ ebe ọ bụla ebe ọdịiche dị elu, nlele nso dị mkpa.
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, Eachinled P2 ime ụlọ ihuenyo gosipụtara gosipụtara na-ebute ụzọ ma na-achịkwa ahịa ngosi ọkụ na-adabere na njirimara dị oke mkpa, Nkọwapụta dị elu, ntụkwasị obi dị elu, nkwụsi ike dị elu na ọhụụ mara mma iji nweta.
na nlezianya mmepụta akara na elu àgwà Ikanam ihe, Anyị P2mm Ikanam ịrịba ama nwere ike na-enye a mkpebi dị elu ọkọlọtọ HD ngosi ngwọta, àjà àjà ihe ọ -ụ -ụ-ezi uche na doro anya visual mmetụta. na ndị ọzọ, elu mma nwa SMD2020 Ikanam iji hụ na anyị P2mm ime ụlọ ofu Ikanam ihuenyo nwere oké ọcha itule ọbụna ọkara n'èzí na gburugburu ebe obibi. E wezụga nke ahụ, imepụta ụlọ ọrụ ndị ọkachamara na ike ịrụ ọrụ nke ọma iji mee ka P2 ime ụlọ anyị nwee akara pụrụ iche, nke siri ike na nke dị jụụ Tụkwasị na nke a, a na-eji usoro nchịkwa ngosi LED na-eduga ụwa iji mee ka Eachinled P2mm dị n'ime ụlọ na-arụ ọrụ ọkụ dị mfe ma na-arụ ọrụ njikwa ọdịnaya dị ike. E wezụga nke ahụ, ọrụ dị iche iche tozuru etozu nke mba ọzọ emeela ka ngosi P2 LED anyị gosipụtara arụmọrụ zuru oke na ndị ọzọ na-ahọrọ anyị ka anyị bụrụ ndị na-eweta ihe nrụpụta ime ụlọ P2 ogologo oge. Ọ bụ nsọpụrụ anyị, bụrụkwa ihe na-akpali anyị, anyị ga-eme, dị ka mgbe niile, maka ndị ahịa ọhụụ na ndị ochie nwere ogo na p2 pixel P2 nke dị n'ime ụlọ na ngwaahịa na ọrụ.
nabata ịmụtakwu banyere ihe ngosi P2 dị n'ime ụlọ anyị